Ihe nkesa raara onwe ya nye: uru maka azụmahịa gị | Site na Linux
Isaac | | Netwọk / Sava
O doro anya na ị hụla ọtụtụ akụkọ gbasara ụlọ ọrụ ebe ụlọ ọrụ na-ere data nke ndị ọrụ ha na ndị ọzọ, ma ọ bụ ebe etinyeghị iwu nchekwa data Europe n'ihi na ha bụ ndị na-eweta mba ọzọ. N'ihi nke a, oru dika GAIA-X apụtala, yana ọrụ igwe ojii dị jụụ na sava raara onwe ya na nche iji chebe ndi ahia gi.
Lọ ọrụ ndị a ga- awade ihe niile ị chọrọ, ma ị chọrọ ọrụ nlekọta weebụ dị mfe na a Linux raara onwe ya nye ihe nkesa na- dị ka a ga - asị na ị na - achọsi ike karịa ma chọọ nnukwu ikike kọmpụta maka Big Data, Mmụta miri emi, wdg, mana na enweghị mkpa ịnweta ụgwọ nke data data na ihe onwunwe.
1 Gịnị bụ raara onwe ya nye ihe nkesa na-?
1.1 Kedu ihe kpatara ịhọrọ ihe nkesa raara onwe ya nye?
1.2 Kedu ihe m ga - eme ya?
2 Kedu otu esi ahọrọ ihe nkesa raara onwe ya nye?
Gịnị bụ raara onwe ya nye ihe nkesa na-?
Un raara onwe ya nye ihe nkesa na-, Ọ bụ ụdị ihe nkesa anụ ahụ ị nwere ike iji zuru oke na naanị. Nke ahụ bụ, ọ bụghị ihe ngwọta ma ọ bụ nkewa pere mpe iji VPS (Virtual Private Server) kesaa akụrụngwa ngwaike n'etiti ọtụtụ ndị ahịa.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ihe nkesa raara onwe ya nye?
Typedị nraranye a nwere ụfọdụ uru doro anya nke ọma banyere VPS:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ikike dị elu, ụdị teknụzụ a dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere VPS.
Enweghi usoro nke ime ihe ike, ị nwere ike iji akụrụngwa akụrụngwa were rụọ ọrụ naanị, nke na-eme ka arụmọrụ dịkwuo mma.
Bandwidth dị elu maka ndị chọrọ okporo ụzọ data dị elu, yana ngwa ngwa TTFB.
O siri ike na nkwụsi ike site na ịrara onwe gị nye.
Mgbanwe na ike ịba ụba ego.
Echere m esi enweta ebe data gị, ma na-enweghị akwụ ụgwọ iji nweta ụdị ọrụ a ma ọ bụ nsogbu njikwa na ndozi. Naanị site na ijiri ọrụ ma malite nrigbu ya ozugbo.
Kedu ihe m ga - eme ya?
Enwere ọtụtụ ọrụ na ndị na-enye sava raara onwe ha nye, dịka ụlọ ọrụ French OVHcloud. Ndị ọrụ igwe ojii a niile nwere onyinye dị iche iche maka ndị ahịa ha, yana ebumnuche dị iche iche, si otú a na-egbo mkpa niile. Ọmụmaatụ:
Na-agba ọsọ: ọ bụ ọrụ kachasị mfe, maka freelancers ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ na-achọ nnabata web, ma maka weebụsaịtị maka ọrụ ha, blog, sava faịlụ, webapps (dị ka ngwa ahịa ERP, CRM, wdg), maka ụlọ ahịa e-commerce, wdg.
nchekwa: ndị a bụ ọrụ nchekwa igwe ojii doro anya nke nwere ikike dị elu n'ọnọdụ ụfọdụ, yana ọ nwere ike ịhọrọ ngwa ngwa ngwa ngwa NVMe SSD siri ike. Nwere ike iji ndị a raara onwe ha nye nchekwa sava echekwa ọdụ data, backups, ekesa Bochum, wdg.
Ịgba Cha Cha: Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmepụta sava gị maka ihe nkiri vidio ma ọ bụ gụgharia, ịnwere ike ịdabere na ụdị ihe nkesa a raara onwe ya nye, yana ihe niile ịchọrọ maka ụdị ọrụ ndị a kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, iji nwee ike ime ihe nkesa Minecraft.
Akụrụngwa: sava raara onwe ya nye di ike nye ulo oru buru ibu, mahadum, na ndi ozo ndi choro ikike di elu, bandwidth, ngwaike maka nkwado, na ikike ncheta di elu.
Ngụkọta ogeServersfọdụ sava raara onwe ha nye nwere ike ịnye ikike nghazi elu. Nke a dị mkpa mgbe ị na-anwa ịgba ọsọ na ngwanrọ nwere nnukwu mgbakọ na mwepụ, dị ka nyocha sayensị na ngụkọta oge, Nnukwu data, Mmụta Ngwa igwe, wdg.
Kedu otu esi ahọrọ ihe nkesa raara onwe ya nye?
Họrọ sava raara onwe ya nye kwesịrị ekwesị Ọ bụghị ọrụ dị mgbagwoju anya, ọkachasị site na azịza doro anya doro anya dị mfe nke ndị na-eweta ya na-eweta ugbu a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu nkọwa, ị kwesịrị ị paya ntị na isi ihe ndị a:
CPU- ga na - echekarị maka ike Mgbakọ ịchọrọ maka ihe mgbaru ọsọ gị. Dịka ọmụmaatụ, maka ntanetị weebụ, ọ dịghị mkpa ịnwe ikike dị oke, mana ọ dị mkpa maka ụfọdụ ngwa sayensị.
RAM: dị ka CPU, ọsọ ya, latency na ikike ya, arụmọrụ nke usoro ihe nkesa raara onwe ya nye ga-adabere.
Nchekwa- will ga-achọta azịza dị iche iche, dịka HDD ma ọ bụ SSD maka sava gị raara onwe ya nye. Ọ dị mkpa ịhọrọ teknụzụ kachasị dabara dịka mkpa gị, yana NMVe SSD bụ nke kachasị ọsọ. Ikwesighi ichefu ikike nke mere na o zuru ezu maka ihe ị na-achọ.
Usoro njikwaA na-ejikarị usoro GNU / Linux eme ihe maka ike, nchekwa, na nkwụsi ike, na mgbakwunye na ikikere ha n'efu. Agbanyeghị, ọtụtụ VPS ma ọ bụ ọrụ sava raara onwe ha nye na-enyekwa ohere ịnwe Windows Server ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ngwa ngwa akọwapụtara.
Ancho de banda: You kwesịrị ichegbu onwe gị banyere oke nnyefe data nke ụdị ọrụ a nyere, ebe ọ bụrụ na ịnwee okporo ụzọ dị elu, ịnwere ike ịkpọzigharị ihe ngwọta yana obosara na-enweghị nsọtụ ma ọ bụ karịa.
GDPR:: Ọ dị ezigbo mkpa ịmara na onye na-eweta ọrụ na Europe, dị ka OVHcloud, nwere ike ịbụ ezigbo ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmanye iwu nchebe data Europe, nke bụ nkwa megide ọrụ igwe ojii ndị ọzọ na-abụghị European.
Na mgbakwunye na isi okwu ndị a, ụfọdụ ọrụ na-enye ụfọdụ teknụzụ nchekwa, nkwado ndabere na mpaghara, wdg. Thisdị a niile mgbakwunye a na-anabata ha mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Netwọk / Sava » Ihe nkesa raara onwe ya nye: uru maka azụmahịa gị
GOS-P3: Inyocha Google Open Source - Nkebi 3